Taatee maakiroo waliin koronyeessuf, jalqaba maakiroo ajajoota weyta taateen uumaman hojirra oolan mara qaban barreessi. Kana booda maakiroo kana gara taatee firoomtuu qabduu ... karaa taatee walgitaniitin cuqaasun ramadi. Qaaqa Maakiroo Ramadi jedhu bana, iddoo maakiroo filuu dandeenyutti.
Gochoonni asiin gadii kun tokkoon tokkoon ijaarame, jechuun isaa qaaqota keetitti fayyadamuu gocha depict godhuu dandeessa.
Ergaa dogoggoraa agarsiisa
Adeemsa haquu dhugoomsuu (kuusaalee deetaatiif),
Weyta kuusaa deetaa olkeessu naqa mirkaneessi
Fakkeenyaaf, fedhii "haqa dhugoomsuu" kan akka "Dhugumatti dhimmamaa XYZ haqxaa?" weyta kuusaa deetaa haqnu dhimmamuu dandeenya.
Tarreewwanii fi ibsamoonni asiin gadii kun taateewwan unkaa keessatti argaman hunda gara maakirookoronyeessa.
Deebi'ee fe'amuu Dura
Gocha kuusaa booda
Gocha kuusaa dura
Unkaan ni haaromfama yoo amaloonni asiin gadii tokko guutame:
Dhimmamaan qabduu (HTML) akka qabduu haaromsa ibsame dhiiba.
Kuusaa haaraa fi duwwaan unkaa gara kuusaa deetaatti koronyate keessatti uumame. Fakkeenyaa, kuusaa dhumaa keessatti, qabduuKuusaa ittaanaa dhiibamuu danda'u.
Jijjiirraa kuusaa booda
Osoo hinfe'amin dura
Yeroo deebi'ee fe'amu
jijjiirraa kuusaa dura